Dib u dhac ku yimid furitaankii shirka Dhuusamareeb + SababtaDib u dhac ku yimid furitaankii shirka Dhuusamareeb | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home News Dib u dhac ku yimid furitaankii shirka Dhuusamareeb + SababtaDib u dhac...
Dib u dhac ku yimid furitaankii shirka Dhuusamareeb + SababtaDib u dhac ku yimid furitaankii shirka Dhuusamareeb
Waxaa maanta dib u dhac ku yimid shirkii madaxda maamul goboleedyada oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.
Sida ay ogaatay warbaahinta, shirkaasi oo maanta ka furmi lahaa Dhuusamareeb, ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada dalku ay isla qaateen inay maanta u noqoto ‘nasiimo’, maadama ay qaarkood shalay tageen magaaladaasi goor dambe.
Kulamo gaar gaar ah ayay Madaxdu yeelan doonaan maanta, iyadoo Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu qado sharaf u sameyn doono wafuuda ay hoggaaminayaan Madaxda Puntland, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa la ciir ciireysa wafuudii ugu badneyd ee ay horkacayaan Madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin waxaa si aad ah loo adkeeyay amniga magaalada.
Shirka madaxda maamul goboleedyada oo uu marti-gelinayo maamulka Galmudug ayaa si rasmi ah u furmi doona maalinta berri oo Sabti ah.